Gadzirira Mac yako kusvika kwemacOS High Sierra 10.13 | Ndinobva mac
Kune mazuva mashoma chete kusvika kuvhurwa kwepamutemo kweMacOS High Sierra 10.13 uye isu tinofanirwa kugadzirira kumutsiridza maMacs kune ino yazvino vhezheni yeanoshanda system nekukurumidza sezvazvinogona. Mune ino kesi uye sezvatinoita neimwe yeimwe shanduro nyowani, rairo zano ndeyekuisa zvese kubva pakutanga, asi pano munhu wese anogona kuita chero chaanoda kubvira haufanire kuita ino yakachena system yekumisikidza.
Kune rimwe divi, uye kunyangwe chiri chokwadi kuti hatifanire kuisa macOS High Sierra kubva pakutanga, zvakakosha kutevedzera matanho mashoma usati waisa iyo OS nyowani. Nzira yakanakisa yekudzivirira matambudziko kugadzirira uye nezviri nani kuita nhevedzano yematanho ekutanga usati waisa iyo nyowani system pane yedu Mac.
Vazhinji vashandisi havadi kuisa kubva pakutanga, saka zvakakosha kuve nezvose zvakakosha zvakachengetedzwa uye kubvisa izvo zvinoshandiswa kana zvirongwa zvatisina kushandisa kwenguva yakareba. Chinhu chekutanga kuve pachena kana Mac yedu ichitsigira iyo nyowani yekushandisa system, Makomputa ese ane macOS Sierra akaiswa anogona kuisa iyo nyowani macOS High Sierra.
1 Kuchenesa mafomu uye zvirongwa
2 Gadzira Backup
3 Mhanya Rubatsiro rwekutanga
4 General kuchenesa
Kuchenesa mafomu uye zvirongwa
Ichi chinofanirwa kuve chimwe chinhu chatinoita nguva nenguva uye kana usiri mumwe wevaya vanoongorora mashandisiro awakaisa paMac yako mwedzi miviri kana yakafanana, zviri nani kuwana izvozvi kuti vhezheni itsva inosvika. Kuti uite izvi, chinhu chiri nyore kudzima ese iwo maapplication atisina kushandisa kwenguva yakareba zvakananga kubva kuLaunchpad. Tinogona zvakare kushandisa chirongwa kana kunyorera zveiri basa, asi ichi chatova chisarudzo chega chega chega, chakakosha kuwana diski nzvimbo pane izvo zvinoshandiswa zvatisingachashandisi.
Iri idanho ratisingakwanise kuita tisina Tisati tavandudzwa / kuisirwa yakachena yeOS, uye kana tichigona kuve ne backup pane rekunze dhisiki uye wozoichengeta isingaite kunze kwekumisikidzwa kweMacOS High Sierra, zvirinani.
Zvinokurudzirwa kuve nechengetedzo makopi akawanda ezvese zvakakosha paMac yedu uye senguva dzose zvatino kurudzira kuve ne backup mune yedu Nguva Machine. Tinogona kushandisa zvimwe zvishandiso asi chakanyanya kunaka kwatiri ndecheApple chairo. Kana isuwo tiine iyi kopi pane rekunze dhisiki panguva yekumisikidzwa, saka chikuru, kana zvisiri, hapana chinoitika.
Mhanya Rubatsiro rwekutanga
Kune avo vasingazive "Rubatsiro rwekutanga" chimwe chinhu yakafanana neDisk Mvumo yekugadzirisa izvo zvatakaita kare kare. Apple yakachinja icho uye kunyangwe chiri chokwadi kuti iwe unogona zvakare kuita chimwe chinhu chakafanana nekugadziriswa kwemvumo, zvakanakisa kushandisa zvakananga iyi sarudzo yatinowana muDisk Utility.
Kuti tiite izvi, tinowana Disk Utility uye tinya pane diski iyo yatinoda kuongorora. Iyi nzira ichaongorora diski kuti iwane zvikanganiso. Kutevera, ichagadzirisa dhisiki kana zvichidikanwa uye wagadzirira kugamuchira vhezheni itsva pasina zvikanganiso.
Yese data yatinounganidza paMac kana tikasachenesa nguva nenguva zvinhu izvo zvatinodhonzera kubva pane imwe vhezheni kuenda kune imwe, kunyanya kana tichigara tichigadzirisa. Saka zvingave zvinonakidza kuita general kuchenesa mafoto, mimhanzi, mafaera uye zvimwe zvinyorwa zvatisingachashandise uye isu tave kutora nzvimbo paMac.
Iwe unofanirwa kufunga kuti isu hatiwanzo kumisikidza nyowani masystem nguva dzose (kunyangwe paine zvigadziriso zviri kuburitswa) saka kuve nekanguva ke "system shanduko" iri nguva yakanaka kwazvo ye ita aya mashoma mabasa izvo chaizvo zvinoita iyo nyowani yekushandisa sisitimu uye kazhinji Mac yedu yese, kuwedzera kurongeka, iine nzvimbo yakawanda uye zvakanyanya kugadzirwa.
Zvine musoro kuti zvese izvi hazvidiwe kana munhu asingade kuzviita, tinogona kuisira MacOS High Sierra tisingaite mabasa aya, asi chiri chinhu icho, sekutaura kwechirevo cheSpanish: "Kamwe pagore hakurwadzi."
Tinogona kushandisa vhiki ino pamberi pekuvhurwa kwesystem nyowani kuita izvi zvakapusa uye zvakakosha kuita kuti zvese zvigadzirire apo iyo nyowani macOS High Sierra yatanga zviri pamutemo neMuvhuro, Gunyana 25. Tinogona kuita mamwe mabasa ekugadzirisa, asi neaya akakosha isu tinoona pamusoro pezvose kwete kurasikirwa chero chinhu chakakosha ne backup yakaitwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Gadzirira Mac yako pakuuya kweMacOS High Sierra 10.13
Michael Andres Garzon Sereno akadaro
Zvinoita sei kuita kumisikidza kubva pakutanga?
Pindura kuna Michael Andrés Garzón Sereno
Ndipo apo pazvinenge zvese zvadzimwa kubva padhisiki rakaomarara uye kubva ipapo sisitimu yekushandisa yakaiswa.
Tora mukana uye cherekedza: Chenjera nezvezvipenga. Wacom yakazivisa rimwe zuva kuti haisati yagadzirira vatyairi veHigh Sierra (izvo zvazvino hazvishande) uye kuti hazvizove navo kusvika kupera kwaGumiguru, kanenge muCintiq renji. Icho chinhu chisingaonekwe asi icho chinogona kuitika nevakawanda vanogadzira.
Kutenda nekuzivisa David,
Zvinowanzo kuve zvisina kujairika kune vanogadzira zvigadzirwa kuti vange vasiri vechinyakare nemadhiraivha panguva iyo itsva OS vhezheni inosunungurwa, asi kana ikakundikana, zvakanaka kuziva.
Iwe unayo sei Gmail pane mac? kwaziso uye yakanaka posvo.
Kwaziso nekutenda Alex,
that capture is old handisisina Gmail paMac yangu
Zvino unazvo sei? Ndeapi maapplication aunokurudzira ekugadzirisa uye kuchengetedza mac? Yangu Inoshanda Sisitimu yakangotyoka uye ini handikwanise kunzwisisa zvakaitika.